#Ashley Williams ayaa ku tagey kooxda Bristol City heshiis waqti gaaban ah
Daafacii hore ee kooxda Everton Ashley Williams ayaa heshiis waqti gaaban ah kula biiray kooxda Bristol City.
Williams, oo laga saaray xulka Wales isbuucaan, wuxuu ahaa koox la’aan tan iyo markii laga fasaxay Everton dhammaadkii xilli ciyaareedkii hore.
Bristol City ayaa leh ikhtiyaar ay ku sii dheereysato heshiiska haddii daafaca dambeedka dhexe uu ku qanciyo Ashton Gate kahor bisha Janaayo.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan Ashley si diiran u soo dhaweeyo” ayuu macalin Lee Johnson u sheegay bogga kooxda. Khibradiisa waxay noqon doontaa mid qiimo badan, garoonka gudahiisa iyo dibadiisa, dhamaanteen waxaan sugeynaa inaan la shaqeyno isaga. ”
Williams, oo 35 jirsaday jimcihii, ayaa laga yaabaa inuu ciyaaro kulanka Sabtida ay wajahayaan Hull City, inkastoo uu qirtay inuusan u badneyn inuu taam ahaansho buuxda helo ilaa bisha soo socota.
Waxaan u baahanahay xoogaa shaqo ah kadib markii aan seegay xilli-ciyaareedkii hore, ayuu yidhi. “Ma aanan ciyaarin tan iyo markii aan xulka qaranka[bishii Juun], laakiin waxaan heysanay qorshe, waana ka shaqeyn doonaa taas labada toddobaad ee soo socda.
“Waxaa jira ciyaartoy wanaagsan, rag fiican oo firfircoon marka ugu horeeysa oo leh maamule abaabulan oo usbuucyada soo socda soo bandhigii doona kulamo qurux badan.